Bye Bye Ravinala sy fanendrena vaovao
2007-05-08 @ 07:24 in Politika
Izay vao tena tsy hita nanjavonana intsony. Raha vao resy tamin’ny fifidianana ny kandidà Ratsirahonana Norbert Lala dia namidiny ny radio televiziona ravinala. Nalaza moa fa ilay mpanomana fampisehoana « Live » izay fantatra amin’ny anarana hoe Andry TGV (Andry Rajoelina no anarany feno) no nividy azy. Dia nihevitra ny maro fa hifaninana amin’ny rta izy io amin’ny famokarana fandaharana miompana be dia be amin’ny kolontsaina.
Raha mbola ravinala ny ravinala dia tao no tena nahenoana sy nahitana adi-hevitra isan-karazany. Na radio na televiziona dia afa-niditra sy nandray anjara hatrany na ny mpanohitra na ny mpanohana. Azo heverina fa ny mpanohitra aza no nahazo vahana kokoa amin’ny fahazoana fitenenana. Raha somary mikatona kokoa ny mbs dia tao amin’ny radio tele ravinala kosa no nahenoana ny hevitra maro na avy amin’ny mpanohana na avy amin’ny mpanohitra. Karazandrazan’ny nanana fahafaham-po noho izany izay mpanaraka adi-hevitra indrindra fa misahana ny politika.
Noesorina avy hatrany ny anarana hoe ravinala sy ny famantarana ny radio tele ravinala fa nisolo halavan’onjam-peo sy sary fotsiny rehefa nandray an-tanana azy ny mpitantana vaovao. Niandry ny maro amin’ny fivoarana mety ho entin’ity mpitantana vaovao ity saingy sarimihetsika sy hirahira ihany no tena mifandimby. Foana avokoa ireo adi-hevitra isankarazany. Tsy maheno ireo karaza-kevitra loatra intsony izay liana ny amin’izany eto Madagasikara. Noheverina ho tetezamita ihany anefa izay tsy fahenoana fandaharana miompana amin’ny adi-hevitra politika izay mandra-pahavita ny fandaminana vaovao.
Herinandro anefa izay dia tsy nandeha intsony ilay televiziona vao novidiana. Dia re ihany koa fa lasan’ny groupe PREY ny rta ( ny groupe REY no fantatro fa tsy io PREY nosoratan’ny gazety io, Razafindravaha Edgar Yvon ilay REY, avy any Imerinkasinina ihany koa araka ny tsiliantsofina). Saingy tsy any amin’ny rta moa ny resaka izao fa ilay tele tsy mandeha intsony. Tsy rta no tsy mandeha intsony fa ny ravinala teo aloha. Nandrasana ny faran’ny herinandro fa tsy nisy na inona na inona intsony. Izay izany no izy amin’ny resaka sy adi-hevitra politika.
Ny karajia sisa no tena fanehoan-kevitra. Ny kidaona maraina manko an-dry zalahy mpanentana ihany ny tena famoahan-kevitra fa vazivazian-dry zalahy raha vao somary matotra ilay resaka hany ka tsy tia miditra amin’io intsony ny mpiady hevitra. Tokana sisa no tena misahana politika eo amin’ny samy mpihaino. Misy ihany ny « invité du Zoma » sy ny isan’alahady ao amin’ny tvplus saingy tsy ampy, ny savaravina ao amin’ny rnm moa dia olona tsy mahazo 1% matetika no mahazo laka ao ka tsy manintona ny mpihaino loatra. Noho izany, ho banga dia banga eo amin’ny mpanara-baovao sy mpanaraka adihevitra politika ny fanjavonan’ny radio tele ravinala izay be fandaharana politika (sy sosialy) tamin’ny androny. Tsiaro azy sisa no antony hanoratana ho azy etoana.
Nisy filankevitry ny minisitra moa omaly alatsinainy maraina. Ny tena nanaitra ny olona indrindra dia ny fanomezana tambiny Ar100.000.000 izay olona na vondron’olona manome vaovao ahazoana misambotra an’Atoa Pety Rakotoniaina Ben’ny tanànan’i Fianarantsoa teo aloha. Fa ny tena lava tao amin’ny tatitra dia fanendrena mpiasam-panjakana ambony eto amin’ny firenena. Nahatratra 33 izany fanendrena izany ka 19 amin’ireo no lehilahy ary ny 14 kosa no vehivavy. Mbola tsy tena nitovy tsara noho izany ny isan’ny lehilahy sy ny isan’ny vehivavy notendrena.
Na izany aza dia 2 amin’ny fanendrena filohan’ny faritra 2 vaovao dia vehivavy avokoa. Ary raha velarina dia 3 amin’ny fanendrena olona 4 ao amin’ny Minisitera ao amin’ny Fiadidiana ny repoblika miandraikitra ny fanapariaham-pahefana sy ny fanajariana ny tany no vehivavy. Ny 10 amin’ny fanendrena 22 vaovao ao amin’ny Minisiteran’ny fahasalamana sy ny fandrindrana ny Fiainam-pianakaviana no vehivavy. 1 amin’ny fanendrena 2 vaovao ao amin’ny Minisiteran’ny asam-panjakana, ny asa ary ny lalàna sosialy no vehivavy. Ireo minisitera ireo no betsaka nanendrena vehivavy ho mpiasam-panjakana ambony.
Ireto manaraka ireto kosa indray no tsy nahitana vehivavy notendrena na dia tsirairay aza ny fanendrena tao anatiny : Ny minisiteran’ny fitsarana, Ny minisiteran’ny toekarena, ny minisiteran’ny fanabeazam-pirenena ary ny minisiteran’ny fifandraisan-davitra.